Movavi Video Ntụgharị Alternative: Faster, More Formats, Initiative
> Resource> Video> Movavi Video Ntụgharị Alternative: Faster, More Formats, Initiative
Achọ a Movavi Video Ntụgharị ọzọ? Ebe a isiokwu a ga-agwa gị a yiri software. Ọ bụghị nanị na-arụ ọrụ dị ka onye ọzọ Movavi Video Ntụgharị, kamakwa nwere ọzọ dị ike ọrụ karịa ya.
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (Windows version dị) bụ nnọọ ihe kasị mma Movavi Video Ntụgharị Alternative. Ị ga-enwe mmasị site na ya 30X ngwa ngwa ọsọ, lossless video akakabarede, ezigbo akakabarede usoro, ndị dị iche iche formats akwado gị na ụzọ maka video customization.
Ihe nke a Movavi Video Ntụgharị Alternative karịrị echiche
Olee otú iji tọghata na Movavi Video Ntụgharị ọzọ
The Movavi Video Ntụgharị Alternative karịrị echiche n'ọtụtụ ụzọ. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime n'elu uru na o nwere n'elu ya asọmpi. Biko lee eziokwu n'okpuru ịchọpụta otú.
Lossless Nchigharị: Na nke a oké usoro ị nwere ike tọghata a faịlụ site na otu usoro ọzọ na 30X ngwa ngwa ọsọ. Ị nwere ike hụ na àgwà mụ dị nnọọ ka ezi dị ka ihe mbụ na otu e ji mara na otu bit ọnụego, mkpebi, etiti ọnụego na ndị ọzọ.
Akwado Massive Media Formats: Na Movavi Video Ntụgharị ọzọ, i nwere ike imeghe dị nnọọ banyere ụdị ọ bụla nke video faịlụ na mgbe ahụ tọghata ya na ụdị format na ị chọrọ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Plus ọ pụrụ ime ka o kwe gị omume na-ekiri gị video on nnọọ ihe ọ bụla na ngwaọrụ, gụnyere iPad, iPod, iPhone, Apple TV, Android, Google Nexus na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọrụ enyi na enyi Interface: Ọrụ nwere ike tinye a faịlụ, bulie chọrọ format, wdg na a mfe iji interface. Ọ na-egosi data na ihuenyo ebe ọ dị mfe ịghọta. Ị adịghị mkpa na-eji oge na-amụta otú e si eji ya. Ya kensinammuo interface dị nnọọ tellsyou ihe niile.
Initiative maka Personalization: Ọ dịkwa ike na-emepụta omenala presets site stipulating na iche iche na ntọala ị na-ahọrọ dị ka mkpebi, bit ọnụego ma ọ bụ etiti ọnụego. Ọzọkwa a Ngwa nwere wuru na-video nchịkọta akụkọ, ị nwere ike hazie gị video tupu conversin dị ka gị uto.
Ebe a bụ ihe atụ nke otú mfe ọ bụ iji tọghata AVI iji Movavi Video Ntụgharị ọzọ:
Nzọụkwụ 1: Mgbe nbudata na wụnye Movavi Video Convereter Alternative, mbubata gị AVI faịlụ site na ịpị "+" button, ma ọ bụ na ịdọrọ na dobe gị video ka a ngwa.
Nzọụkwụ 2: Họrọ gị chọrọ format na mmepụta format ebi ndụ na ala nke interface.
Nzọụkwụ 3: Malite akakabarede. Pịa tọghatara button na ala nri nke interface, na usoro amalite.
Freecorder ọzọ: A More vasatail, Advanced Video Ntụgharị
Nweta Best Alternative DVDVideoSoft
5 Atụmatụ i nwere mara banyere youtube 4k video
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere ngwa ngwa ihuenyo edekọ
Olee otú Download Hulu ka Apple TV
Olee otú SPLIT YouTube Videos rụọ ọrụ nke ọma